ध्वनि विकल्प प्रयोगकर्ता को आवश्यकता मा निर्भर गर्दछ। तपाईं एक घर थिएटर वा पोर्टेबल स्पिकर खरिद गर्न खोजिरहेको छ भने, यो विभिन्न विकल्प विचार गर्न आवश्यक छ। तर तपाईं पहिले नै निर्माता को विकल्प मा निर्णय गरेका छौं भने, त्यसपछि आधा काम गरेको छ कि विचार गर्नुहोस्। हामी श्रवणशास्त्र अडियो मनिटर विचार गर्नुहोस्।
अडियो मनिटर कम्पनी 1972 मा स्थापित भएको थियो। कि अडियो सिस्टम को डिजाइन र विकास मा माहिर एक ब्रिटिश कम्पनी। कम्पनी पहिले स्थान धेरै पटक परिवर्तन भएकोले क्याम्ब्रिज नजिकै एउटा सानो कारखाना मा काम सुरु भयो। कम्पनी आफ्नो उत्कृष्ट ध्वनिक मोडेल, हामी थप छलफल गर्नेछन् जो चिरपरिचित धन्यवाद भएको छ।
हामी श्रवणशास्त्र अडियो मनिटर सामना गर्नु अघि, तपाईं यसलाई के हो बुझ्न आवश्यक छ। सामान्यतया, यो शब्द ग्रीक "सुन्न" अर्थ हो। यो ध्वनि भौतिक, यसको समस्या, आफ्नो मूल, वितरण, धारणा र प्रभाव को प्रकृति अध्ययन जो ध्वनि को विज्ञान, छ। हामी यो कागज विषयको फर्कन भने, हामी वक्ताले बारेमा कुरा गर्दै छन्।
यस मामला मा, स्पिकरहरू ध्वनिक डिजाइन मा निर्मित र टाउको माउन्ट छ जो ध्वनि, खेल्छ भनेर उपकरण प्रस्तुत।
वक्ता पूर्ण फरक हुन सक्छ। त्यसैले, प्रौद्योगिकी मानकहरु बाहेक, यो अर्थमा प्रकार ध्यान बनाउँछ। घर साधारण आउटडोर वक्ता, पुस्तकराख्नेदराज र पोर्टेबल।
तल्ला एक शक्तिशाली ध्वनि प्रणाली सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूका लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प छ। वक्ता र उच्च गुणस्तरीय अडियो स्रोत को एक जोडी यो सबै धन्यवाद। यो सबै धनी stereostseny सिर्जना गर्न काम वा बहु-च्यानल सिस्टम को आधार मा एक frontal लहर खेल्छ छ जो एक असल एम्पलीफायर, संग पूरक गर्न सकिन्छ। तपाईं गठन एक दृश्य सकेसम्म राम्रो सुनिन्थ्यो बनाउन चाहनुहुन्छ भने, sounder को एक जोडी थप्नुहोस्।
तल्ला प्रकार ठूलो आकार र बाक्लो काठको पर्खाल द्वारा विशेषता छ। यो डिजाइन ठूलो क्षेत्रमा एक ध्वनि रेकर्डिङ सिर्जना गर्छ। यस्तो प्रणाली मात्र drawback - यो दिनु स्पंज compartments लागि अनुनाद कम्पन वक्ता, प्रबलित निर्माण र विशेष antiresonant चेसिस।
शेल्भिङ सिस्टम एक घर थिएटर सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ नगर्ने ती को लागि सबै भन्दा सुविधाजनक छ, तर उहाँले संगीत सुन्न रुचि। Audiophiles एउटा सानो कोठा को आकार को लागि क्षतिपूर्ति गर्न, यस प्रकारको प्राप्त। प्रयोगकर्ता समतल मा वक्ता ठाँउ, कि शीर्षक देखि स्पष्ट छ। वा थप विरोधी-कम्पन पट्टी प्राप्त। तसर्थ, ठंडे बस्ते सिस्टम - मिनी-प्रणाली वा डकिंग स्टेशन लागि आदर्श।
ध्वनि अडियो मनिटर पोर्टेबल हुन सक्छ। त्यसैले, केही समय अहिले जो मात्र होइन सडक मा बाहिर लिन सकिन्छ वा एउटा यात्रा सँग लिन, तर दैनिक जीवन प्रयोग गर्न लोकप्रिय गुणस्तर संकुचित वक्ता, भएको छ।
अर्को, हामी प्रत्येक लागि धेरै मोडेल विचार वक्ता को प्रकार। तुरुन्तै यो फरक निर्माताहरु मोडेल आवश्यक सामान्यतया किनभने, यो मूल्यांकन छैन भनेर भन्न हुँदैन। हामी एक विशेष कम्पनी को उत्पादन विचार भने, यो सबै भन्दा लोकप्रिय विकल्प चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। बाहिरी वक्ता अडियो मनिटर यसको आर्सनलमा धेरै मोडेल छ। सबैभन्दा रोचक को एक जोडी विचार गर्नुहोस्।
चाँदी 8 - तीन-तरिका वक्ता, धेरै महंगा र गुणस्तर सामाग्री बनेको छ जो। यो उपकरण एक प्रिमियम मानिन्छ। 2000 डलर को लागत prohibitive छैन तापनि अझै सबैलाई आफूलाई जस्तै वक्ता किन्न सक्नुहुन्छ।
प्रणाली रूपमा लागत रूपमा महंगा देखिन्छ। त्यस्तो कालो ओक, रातो ओखर, सेतो पियानो लाह र यति मा। एक धातु sheen संग वक्ता द्वारा complemented काठ पोशिश को फिनिशिङ रूपमा धेरै परिष्करण विकल्प, छ। लुकाउने द्वारा ग्रिड इन्च tweeter घरको छानो झिल्ली पाए। सेरामिक्स संग एल्यूमीनियम मिश्र धातु त्यहाँ प्रयोग।
प्रत्येक पल्ट, चार वक्ता छ बनावट fazoinvertnogo दुई बन्दरगाह र प्रविधि HiVe द्वितीय छ। 35 kHz - 32 हर्ट्ज नजिकै मान फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड दायरा। संग 90 मा dB संवेदनशीलता।4ohms को नाममात्र प्रतिबाधा। कुल शक्ति 200 वाट छ।
कम अन्त मोडेल
तल्ला वक्ता अर्को रोचक भेद - मनिटर अडियो रजत6अघिल्लो मोडेल को यो जूनियर संस्करण। तर यो पनि घर थिएटर सेटअप लागि डिजाइन गरिएको छ। 2,5-तरिका विन्यास, सुसज्जित दुई midbass संग। ब्राण्ड diffusers अझै पनि सेरामिक्स संग संयुक्त एल्यूमीनियम-म्याग्नेसियम मिश्र धातु को गरे।
रेटेड प्रतिबाधा,6ohms पुग्यो यसरी संवेदनशीलता उतारचढाव वरिपरि 88-90 dB। आवृत्ति सीमा 38 हर्ट्ज - 31 kHz। विशेष वक्ता, दस्तावेज, नियन्त्रण र ग्रिड समावेश छन्।
यस्तो मोडेल सामान्यतया ग्राहकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउन। तिनीहरूले उच्च-गुणस्तर, विचारशील र एकै समयमा सरल छन्। राम्रो खेलाडी संग जोडीएको ठूलो आवाज दिन र आवृत्तियों को पूर्ण सीमा देखाउँछ। सबै प्राविधिक लाभ बाहेक, तिनीहरू सिद्ध नजर हो र उच्च लागत को भित्री थप्नुहोस्।
एक शेल्फ मा
पुस्तकराख्नेदराज वक्ता अडियो मनिटर एक मोडेल कांस्य IN1 प्रतिनिधित्व छ। दुवै वक्ता, ठूलो लगभग सिद्ध हेर्न। तिनीहरूले राम्रो शरीर सामाग्री, बलियो, उच्च गुणस्तरीय र टिकाउ छ। उपकरण उचाइ मा यो 35 सेन्टिमिटर को कुल पाए।
सामान्य रूपमा, त्यहाँ finishes को एक ठूलो विकल्प छ, यन्त्र पूर्ण कोठा को भित्री मा फिट सक्छ। पछाडि टर्मिनलहरु को एक जोडी छ, नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरिन्छ, tweeter, Midrange र woofer।
केही विधाहरू वक्ता आउटपुटहरू ध्वनि आधारमा। केही अवस्थामा, यो स्वच्छ र विशाल को बास, शक्तिशाली कम आवृत्ति वा दायरा धड्कने। सजिलै rhythms हराउछ। यो विकल्प आफूलाई पूर्णतया महसुस, राम्रो यसको लागि एक राम्रो एम्पलीफायर किन्न।
यो मोडेल संगीत प्रेमीहरूलाई र विशाल कोठा को deprived निम्ति ठूलो विकल्प थियो। एउटा सानो आवाज कोठा को टाउको संग पर्याप्त। उहाँले सजिलै र समान रूप सर्छ, कोठा को हरेक कुना "नजिकै"। आफ्नो आकार - यो आफ्नो फाइदा छ। सदस्यहरूले राम्रो डिजाइन, सफा mids, गहिरो बास र मात्रा उल्लेख गरे। उजुरी गर्ने विवरण फिक्री। अझै पनि, यदि audiophiles समावेश जटिल rhythms केही inaccuracies सुन्न सक्नुहुन्छ।
गत वर्ष यो पोर्टेबल स्पिकर अडियो मनिटर AirStream S150 प्रकाश आए। सुनको यो धेरै आकर्षक देख्यो रूपमा, सकारात्मक प्रतिक्रिया धेरै पायो गर्नुपर्छ। यो मोडेल को उत्पादन tweeter गोल्ड डोम को thirtieth वार्षिकोत्सव को प्रशंसक निर्माता स्मरण गराउन थियो।
यो स्तम्भ कोइला कालो ग्रिल संग जोडीएको गतिशीलता लुकाउने जहाँ आपूर्ति गरिएको छ। दुवै पक्षले त्यहाँ3इन्च बास चालक थिए, र बीच मा प्रसिद्ध गोल्ड डोम लुकाउनु भएको थियो। त्यहाँ डी एम्पलीफायर भनेर 40 वाट को कुल शक्ति को ध्वनि सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ छन्।
पाउण्ड मात्र 150 पहिलो ब्रिटिश नयाँ उत्पादन प्रयास गर्न सक्षम थिए। वायरलेस स्पिकर, सामान्य रूपमा, USB काम, ग्याजेटहरू चार्ज लागि अभिप्रेरित। त्यहाँ अर्को प्रकारको 3.5-मिमी स्लट समिकरण उपकरण थियो। आवश्यक भएमा, यो पर्खाल मा वक्ता रचनाहरू गर्न सम्भव थियो।
ध्वनि अडियो मनिटर एमआर श्रृंखला पनि प्रयोगकर्ता बीच लोकप्रिय छ। उदाहरणका लागि, सबै भन्दा तिनीहरूलाई लोकप्रिय को एक MR2 मोडेल थियो। यो वक्ता, जब एक रैक मा स्थापित सर्वश्रेष्ठ प्रकट भएको छ, जो। लामो निर्माता मा एक आँखा राखिएको भएकाहरूलाई खुसी जो, तर यसको उत्पादन किन्न सकिएन सस्तो विकल्प।
यो श्रृंखला अक्सर एक समयमा सस्तो मानिन्छ थियो BR, संग तुलना। यो विकल्प पनि सस्ता भएको छ। उहाँले केही inaccuracies परिमार्जन थियो। वृद्धि आकार, सुसज्जित केही प्राविधिक नवाचारै संग। MR2 मोडेल - यो उपलब्ध मोडेल को सबै भन्दा सुलभ छ। यो शैली र वर्ग देखाउन डिजाइन गरिएको छ। आवास एक बिट राउण्ड थियो, ओखर वा ओक को एक विकल्प मा एक Vinyl समाप्त भएको छ।
रूपमा समतल मा भन्दा खडा सुरुमा, उत्कृष्ट भावना उल्लेख गरे। तर पनि त्यो बिना यो उच्च गुणस्तरीय ध्वनि, विस्तृत सन्तुलित र सफा reproduces।
मालिक बाट प्रतिक्रिया
एक सारा रूपमा श्रृंखला सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छ। मुख्यतया कारण वास्तवमा कि यो धेरै खरीदारों उठयो सकेन। सदस्यहरूले शुद्धता र काम को गति, आकर्षक डिजाइन, एक सफल डिजाइन उल्लेख गरे। मालिकको उत्तरदायित्व माधुर्य र ध्वनि भन्छन्, तर प्राप्त गर्न सम्भव छ कि उच्चतम गुणस्तर ध्वनि प्राप्त गर्न, यो स्तम्भ गरम करना गर्न आवश्यक छ।
ध्वनि मनिटर अडियो कांस्य पनि, संसारभरि र रूस मा लोकप्रिय छ। 1998 मा फिर्ता, विश्व कांस्य, रजत र स्वर्ण तीन लोकप्रिय श्रृंखला देखे। बस कांस्य बारेमा र हामी कुरा छौँ। यो विकल्प धेरै को मोडेल। त्यसैले, बाहिरी श्रवणशास्त्र एक राम्रो विकल्प एक मोडेल कांस्य BX5 भएको छ। शारीरिक प्रकार - vented। धेरै रंग मा उपलब्ध छ।
90 dB संवेदनशीलता 8 ohms को नाममात्र प्रतिबाधा। वक्ता संख्या - तीन। अधिकतम शक्ति एक तल्ला प्रणाली, को पाठ्यक्रम, एक कम आंकडा लागि, 150 वाट छ। तर यो अझै पनि ठूलो मा औसत वक्ता लागि पर्याप्त हुनेछ। आवृत्ति सीमा 36 हर्ट्ज - 30 kHz। त्यहाँ सबै आवश्यक connectors र स्लट छन्।
ध्वनि अडियो मनिटर आफ्नो समय मा एक पंथ भयो र आफ्नो उत्पादन संग प्रशंसक प्रसन्न जारी। कम्पनी धेरै मोडेल, धेरै अन्य निर्माताहरु जस्तै जारी छैन, तर जब नवीनता प्रस्तुत, को साँढेको आँखा सधैं हिट। र हामीलाई अगाडि यो एक उत्तम उत्पादन कुनै पनि प्रयोगकर्ताको लागि उपयुक्त छ भन्ने छ।
कम्पनी मात्र संगीत प्रेमीहरूलाई र audiophiles को कान ख्याल गर्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै पारंपरिक मोडेल, तल्ला प्रणाली साथै तखता लागि डिजाइन जो छन्। हालै थप र आफ्नो विकल्प विस्तार र वक्ता सबै खरीदारों उपलब्ध बनाउन प्रयास। तर अझै पनि ज्यादातर उच्च गुणवत्ता परिष्करण सामाग्री र उच्च ध्वनि प्रदर्शन संग महँगो प्रणाली गर्न भन्छिन्।
उदाहरणका लागि, अडियो मनिटर श्रवणशास्त्र को मालिक राम्रो, विस्तृत, शक्तिशाली ध्वनि छन्। र उहाँले लगभग लागत सापेक्षित परिवर्तन गर्दैन। मूल्य सानो प्रतिबाधा र कुल शक्ति को मामला मा, फ्रिक्वेन्सी दायरामा भेरिएसनहरूमा प्रभावित गर्न सकिन्छ। साथै, कहिलेकाहीं एक विशेष मोडेल को मूल्य निर्धारण मा एक ठूलो भूमिका सामाग्री को आफ्नो उपस्थिति र विकल्प खेल्छ।
लोकप्रिय मोडेल को एक समीक्षा: के द्वारा मापदण्ड एक वायरलेस पोर्टेबल भ्याकुम क्लिनर चयन गर्न
प्लाज्मा टीवी सैमसंग: चयन विशेषताहरु
TCL टीवी। समीक्षा, सुविधाहरू, चयनमा सल्लाह
टिभी सैमसंग UE40J6500AU: समीक्षा र विनिर्देशों
कसरी meatballs लागि सस तयार गर्न?
पूर्ण-fledged अनुशासन रूपमा दर्शन इतिहास
एक छडी नुस्खा मा Cockerel
एक पोर्क टुकडे करो कसरी खाना पकाउनु?
को माइक्रोवेव हट सैंडविच - सबै भन्दा राम्रो भोजन
किन कोदो द्वारा वजन?